Muuqaalka Fiidiyowga cusub ee DCS wuxuu muujinayaa F / A-18 Autopilot lammaane ah
DCS oo muujineysa qaabka lammaanaha Autopilot-ka ah ee loogu talagalay F / A-18C Hornet (ku imanaya cusbooneysiinta soo socota).
Imaatinkeenna cusboonaysiinta weyn ee soo socota ee loo yaqaan 'Hornet', qaabka loo yaqaan 'Coupled Autopilot' wuxuu u oggolaanayaa diyaaradda in ay si toos ah ugu duusho meel cayiman. Tani waxay noqon kartaa bar-tilmaameed, saldhigga TACAN, ama bartilmaameedka (TGT) goobta marka lagu jiro habka gaarsiinta AUTO. Markii lagu lamaaneeyo shaqada Jidka AUTO ee HSI, waxay sidoo kale u oggolaanaysaa socodka gacmo-dhaqaajinta markaad duulimaadka ku dhex marayso dhibco taxane ah. Markaad ku jirto Moodada Isku-xidhka, khadka koorsada si loo gaadho goobta loo dejiyey sidoo kale waa la hagaajin karaa.
La daabacay: 30 Maarso 2021